तातो पानी पिएर यसरि घटाँउनुहोस आफ्नो वजन । - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 08:39 Updated: Jul 25, 2021 - 18:27
हाम्रो शरीरको लागि पानी धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। विज्ञहरूका अनुसार हामीले दैनिक ७ देखि ८ गिलास पानी पिउनु पर्छ। साथै, केही मानीसहरु भन्छन, हामीले सामान्य कोठाको तापक्रम सहित पानी पिउनुपर्दछ, पिउने पानीको बारेमा विभिन्न विशेषज्ञहरूको राय जस्तोसुकै हुन सक्छ, तर तथ्य यो हो कि तातो पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि धेरै किसिमले लाभदायक छ, विशेष गरी जब तपाईं आफ्नो तौल घटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं तौल घटाउन पनि व्यस्त हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए मान्छेहरूको कुरा सुनेर तपाईंले थुप्रै सुझावहरू अवलम्बन गर्नुभयोहोला, जस्तै कार्बोहाइड्रेट नखोज्नुहोस, प्रोटीनयुक्त खाना खानुहोस, चिनीको सेवन नगर्नुहोस र नुन कम खानुहोस्, बिहानको ब्रेकफास्टमा केवल फलफूलहरू खानुहोस र रातमा खाना नखानुहोस, वा अन्य धेरै डाइटिंग प्रोग्रामहरू। तर हामी तपाईलाई भन्छौं कि यो सबै गर्नुको सट्टा, यदि तपाई केवल एउटा चीज गर्नुहुन्छ जुन तपाईले दिनहुँ तातो पानी पिउन थाल्नुभयो भने यसले तपाईलाई तौल घटाउन निश्चित रुपमा मद्दत र्पुयाउँछ, तपाईले हाम्रो कुरालाई सजिलै विश्वास गर्नुहुने छैन होला, तर यो सत्य हो।
तातो पानीले कसरी वजन कम गर्छत?
यद्यपि तपाईंले पहिले नै सुनेका हुन सक्नुहुनेछ कि मानिसहरूले तातो पानी पिउँदा तौल घटाउन मद्दत गर्दछ, तर हामी तपाईंलाई यस बारेमा बिशेष जानकारी एवंम तातो पानी पिउने उपाय बताउँदैछौं ।
तातो पानी पिउँदा शरीरको तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली सक्रिय हुन्छ। तातो पानीको तापमानको लागि क्षतिपूर्ति दिनको लागि, शरीरले आन्तरिक तापक्रमलाई कम गर्दछ, यसैले मेटाबोलिज्म सक्रिय गर्दछ।
तातो पानी पिउँदा तपाईंको मेटाबोलिजम बढ्छ। तातो पानीले शरीरको सुस्त प्रक्रियालाई छिटो गर्दछ र स्वस्थ तरीकाले तौल घटाउन मद्दत गर्दछ।
तातो पानीले तपाईंको डाइटमा रहेको फ्याट अणुहरू नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ, जसले यी बोसो कोषहरूलाई सजिलै बर्न र वजन घटाउन सहयोग गर्दछ।
यो मात्र होईन, तातो पानीले तपाईंको भोक कम गर्दछ। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं खाना खानु भन्दा पहिले १५ देखि ३० मिनेट पहिले तातो पानी पिउन सक्नुहुन्छ। यो गर्नाले तपाईंलाई कम भोक लागेको महसुस हुनेछ र तपाईं कम खानु हुनेछ, जसले तपाईंको क्यालोरी सेवन १३ प्रतिशत घटाउनेछ र यसले वजनलाई नियन्त्रणमा राख्नेछ।
तातो पानी पिइसकेपछि, तपाईंको पेट भरिएको महसुस गर्नुहुन्छ जसको कारण केही खाने तपाईंको तीव्र इच्छा पनि कम हुन्छ।
तातो पानीले पाचन प्रक्रिया सुधार गर्न मद्दत गर्दछ जसले गर्दा खाना सजिलै पच्दछ। तातो पानी पिउँदा आन्द्राका भागहरु हुदै शरिरमा पुग्दछ, जसले शरीरमा उपस्थित फोहोर पदार्थ हटाउन मद्दत गर्दछ। तातो पानी भनेर त्यति तातो पनि होइन जे होस तपाइको शरिरले थाम्न सक्ने पानी सम्झनुहोस। जे होस, खानामा तातो पानी समावेश गर्न त्यती सजिलो हुदैन किनकि तातो पानी पिउँदा सुक्खा मुख हुन्छ, तर यदि तपाईं यसलाई नियमित रूपमा सेवन गर्नुभयो भने तपाईंको तातो पानी पिउने बानी बस्नेछ र तपाईंले यसको फाइदा सजिलै देख्नुहुनेछ एवम महसुस गर्नुहुनेछ।
तातो पानी पीएर तौल घटाउने उपायहरु के के हुन?
बिहान सबेरै उठ्नु सँगै खाली पेटमा एक गिलास तातो पानी पिउनुहोस्।
बिहानको खाजा, खाना वा डिनर कुनै पनि खाना खानु अघि २० अथवा ३० मिनेट अघि एक गिलास तातो पानी पिउनुहोस्।
याद गर्नुहोसकि तपाईंले पिउनु भएको तातो पानीको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी वा कम हुनुहुँदैन। यदि पानी धेरै तातो भयो भने मुख पोल्न सक्दछ र यदि धेरै तातो छ भने चाहेको परिणामहरू उपलब्ध हुँदैनन्।
यदि तपाईं तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं नुहाउनु अघि १ गिलास तातो पानी पिउँदा उपयुक्त हुन्छ।
यस बाहेक, सुत्नु अघि मन तातो पानी पिउँदा शरीरका स्नायुहरूलाई आराम दिन्छ र शान्त हुन्छ, जसले तपाईंलाई शान्त र गहिरो निद्रा बनाउँछ। राम्रो र पर्याप्त निद्रा तौल घटाउन को लागी पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र निद्रा पनि तौल घटाउन को लागी एक महत्वपूर्ण उपाउ हो।
तौल घटाउन तातो पानीको सेवन लाभकारी हुन्छ, तर तपाईं कुनै प्रकारको जंक फूड वा अरु खाना सँग तातो पानी नपिउनुहोला। साथै चिनी, अधिक र्काब्स र क्यालोरीको कम उपभोग गर्नुपर्दछ।
तौल घटाउनको लागी तातो पानी पिउँदा यी कुराहरुलाई ख्याल गर्नुका साथै दिमागमा राख्नुहोस।
तातो पानी पीएर तौल घटाउन सकिन्छ यसका साथै तातो पानी मात्र नभई उपयुक्त पोषण का साथै व्यायाम को पनि आवश्यक पर्दछ। दैनिक १ गिलास पानी अर्थात २५० मिलिलिटर तातो पानी ले १२ क्यालोरि र्बन हुन्छ त्यसकारण नियमीत रुपमा पानी पिउँदा शरिरमा सकारात्मक नतिजा देखिनुका साथै तौल कम गर्न मद्दत पुग्दछ।
यसका साथै तलका केहि महत्वपुर्ण कुरा हरु ख्याल राख्नु होला।
धेरै तातो पानीले पनि शरिरको बिभिन्न पाचन प्रणाली लाई असर गर्दछ, त्यसैले १ दिनमा ४/५ गिलास पानी पिउँदा उपयुक्त हुन्छ।
एकै पटक सबै तातो पानी पिउनु भन्दा केहि समयको अन्तरालमा पिउनुपर्दछ।
तौल घटाउनको लागी बिहान उठ्ने बितिक्कै तातो पानिमा निम्बु राखेर खाँदा अझ प्रभावकारी हुनेछ।